Wariyayaashii lagu xiray Bujumbura oo la sii daayey - BBC News Somali
Wariyayaashii lagu xiray Bujumbura oo la sii daayey
29 Jannaayo 2016
Labo wariye oo u kala dhashay Britain iyo France oo shalay lagu xiray caasimadda Burundi ee Bujumbura,ayaa maanta la sii daayey markii uu dacwadoodii dhageyste garyaqaan dawladda ka tirsan. waxaase wali socda baaritaan la baarayo labada suxufi oo lala xiray 15 qof oo kale.
Jean Philppe Remy, waa tafaftiraha Afrika ee wargeyska France Le Monde, wuxuu howl la qabanayay sawir qaadaha madaxa banaan Phil Moore baaritaanka ka sokow waxaa golaha qaranka ee is-gaarsiintu uu sheegay in lagala noqday ruqsadii ay kaga shaqeynayeen Burundi.
Labaduba dhowr jeer ayey u safreen Burundi, tan iyo markii dagaalku bilowday. Afhayeen u hadlay booliska, Pierre Nkurikiye, ayaa BBC-da u sheegay inay la socdeen rag ku hubeysan bistoolado oo doonayey in ay dambi galaan.
Ururka suxufiyiinta shisheeyaha ee bariga Afrika, ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xarigga suxufiyiinta oo ay ku tilmaameen dad shaqadooda aqoon u leh.
Waxayna labaduba ku guuleysteen dhowr abaalmarin saxaafadeed.